IBafana Bafana ibhekene nohide lwemidlalo | News24
IBafana Bafana ibhekene nohide lwemidlalo
PHOTO:gallo images Umqeqeshi weBafana Bafana uShakes Mashaba ubingelela abalandela lapho efika esikhumbulweni sezindiza i-OR Tambo International Airport.
IBAFANA Bafana izothwala kanzima kulezi nyanga ezizayo ngendlela imidlalo ehlelwe ngayo. Kuzobaluleka ukuthi umqeqeshi waleli qembu u-Ephrain “Shakes” Mashaba kanye nenhlangano ayisebenzelayo iSafa baqiniseke ukuthi iqembu likhulu, nabadlali abangasetshenziswa baningi futhi bayatholakala.
Uhla lwemidlalo ezodlalwa yiBafana Bafana lutshengisa nokuthi bazophoqeleka badlale kabili enyangeni kuze kuyophela lonyaka esikuwona. Kanti ngo-October iyona ezoba bhizi noma ezoxaka kakhulu nalapho bayophoqeleka ukudlala imidlalo emine.
Kahle-hle isiyonke imidlalo iyisishiyagalombili esikhathini esiyinyanga ezintathu.
Noma kukekwaba sengathi leli qembu like laba nekhefu elijana, lezi zinyanga ezizayo nemidlalo zizoba yinselelo enkulu.
Owokuqala umdlalo obalulekile iBafana Bafana ezoqala ngawo izobheka neMauritania emqhudelwaneni wekwiCAF Orange Africa Cup of Nations 2017 ekuhambeni ngalo Mgqibelo esiya kuwona ( 5 September).
Emva kwezinsukwana ezimbalwa nje bedlalile, ngoLwesibili wangoSeptember 8 bazobuya bazodlala eSoweto emdlalweni okulindeleke ukuthi ube nzima womqhudelwano we-2015 Nelson Mandela Challenge edlalwa minyaka yonke. Lo mdlalo wokuhlophina lengwazi yaseMzansi eyaba nguMongameli wokuqala weNingizimu Afrika ekhululekile uNelson Mandela, uzodlalelwa e-Orlando Stadium ngo-7 kusihlwa.
Ngokuhlelo lwemidlalo elumenyezelwe uSafa ngasekupheleni kwesonto eledlule, uMzansi uyobuye udlale neCosta Rica eCentral America okuwumdlalo wesihle ngo-8 October ozoba usedolobheni laseCosta Rica eLiberia.
Kanti iqembu laseMzansi, iBafana Bafana phela angeke ibuye ngoba iyoqhubeka ihlale eCentral America ukuze ibhekise amabombo eSan Pedro, Sula lapho iyobhekana ne
Honduras ngo-13 October. Kanti iSafa isazomemezela izikhathi imidlalo eyoqala ngaso kanye nezinkundla.
Kanti ekubuyeni kwayo iBafana Bafana iyobheka ne-Angola kweminye yemidlalo yayo ezobe iza ngokulekana.
Lo mdlalo uzobe ongowokuhlungela i-2016 Chan, uzobe ungo-17 October enkundleni esazomenyezelwa kodwa lo mdlalo uyoqala ngo-3 ntambama. Umlenze wesibili walo mdlalo phakathi kwalamazwe womabili ezinkundleni zase-Estádio Nacional 11 de Novembro (11th November National Stadium) eLuanda.
Kanti ngo-13 November uchungechunge phakathi kwala mazwe luyoqhubeka futhi lapho eyohlangana khona emdlalweni wokuhlungela iFifa 2018 Russia World Cup ezinkundleni zase
Estadio Nacional de Ombaka (Ombaka National Stadium) eBenguela- Angola. Kanti umlenze wesibili walo mdlalo uyoba ngo-17 November ngo-7 kusihlwa eMoses Mabhida Stadium kwelikabhanana, eThekwini phela.
Kanti uMashaba yena uthi akesabi lutho futhi uyaziqhenya ngezwe laseMzansi futhi uyabathemba abadlali bakhe, kodwa zonke izinhlaka zebhola njengeSafa nePSL kanye namaqembu kofanele zibambisane.
“Angithukile mina, vele ibhola lomhlaba nase-Africa liba nje. Mhlawumbe into ezosisiza ukubambisana kwawowonke umuntu osebholeni laseMzansi. Sinabadlali abesemgathweni futhi abakhaliphile nabalukhali. Sizimisele ukuyibamba ishisa ukuze siqhubekele phambili siphumelele,” kusho uMashaba.
*Kanti uhla lwemidlalo isiyonke yeBafana Bafana imi kanje.
Saturday, 5th vs Mauritania 2017 Afcon qualifier (A)
Tuesday, 8th vs TBC 2015 Nelson Mandela Challenge (Orlando)
Thursday, 8th vs Costa Rica International Friendly (A)
Tuesday, 13th vs Honduras International Friendly (A)
Saturday, 17th vs Angola 2016 Chan (TBC)
Saturday, 24th vs Angola 2016 Chan (A)
Friday, 13th vs Angola Fifa 2018 Russia World Cup qualifiers (A)
Tuesday, 17th vs Angola Fifa 2018 Russia World Cup qualifiers (Durban)